Akụkọ - Nokia Bell Labs na-edepụta ihe ọhụrụ na fiber optics iji mee ka netwọkụ 5G nwee ike ngwa ngwa na elu nke ọdịnihu
Na nso nso a, Nokia Bell Labs kwuputara na ndị nyocha ya setịpụrụ ndekọ ụwa maka ọnụọgụ ntakịrị ụgbọelu kachasị elu na eriri ngwa anya otu ụdị nke kilomita 80, yana nke kachasị nke 1.52 Tbit / s, nke dị nha izipu 1.5 nde YouTube vidiyo n'otu oge. Ọ bụ okpukpu anọ nke teknụzụ 400G dị ugbu a. Ihe ndekọ ụwa a na ihe ntanetị ndị ọzọ na-ahụ anya ga-eme ka ikike Nokia nwee ike ịmepụta netwọk 5G iji zute data, ikike, na mkpa oge nke Intanet nke Ihe na ngwa ndị ahịa.
Marcus Weldon, onye isi ndị ọrụ Nokia na onye isi oche Nokia Bell Labs kwuru, sị: “Kemgbe e mepụtara eriri ngwa anya dị ala na ngwa anya yiri ya afọ iri ise gara aga. Site na sistemu mbu nke 45Mbit / s rue sistemu 1Tbit / s nke taa, O bawanyela kariri oge 20,000 na afo iri ano ma mekwaa ka anyi mata ihe anyi mara dika Intanet na ndi mmadu. Ọrụ nke Nokia Bell Labs na-abụkarị ịgba mgba na ịkọwapụta oke ga-ekwe omume. Ihe ndekọ ụwa ọhụrụ anyị na nyocha anya na-egosipụtakwa ọzọ Anyị na-echepụta netwọkụ ngwa ngwa ma dịkwa ike karị ịtọ ntọala maka mgbanwe ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-esote. 1.52Tbit / s. Edebere ndekọ a site na iji ihe ntụgharị 128Gigasample / nke abụọ nwere ike iwepụta akara na akara ngosi nke 128Gbaud, yana ọnụego ozi nke otu akara gafere 6.0 bits / symbol / polarization. Mmezu a mebiri ndekọ 1.3Tbit / s nke otu ahụ mepụtara na Septemba 2019.
Onye nyocha Nokia Bell Labs Di Che na ndị otu ya setịpụrụkwa ndekọ data data ọhụụ maka DML lasers. DML lasers dị mkpa maka ọnụ ala, ngwa ngwa ọsọ ọsọ dịka njikọ njikọ data. Ndị otu DML nwetara nzipu data karịrị 400 Gbit / s karịrị njikọ 15-km, na-edekọ ndekọ ụwa.
N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ nyocha na-arụpụta ihe ndị ọzọ dị mkpa n'ọhịa nke nkwukọrịta anya.
Ndị na-eme nchọpụta Roland Ryf na ndị otu SDM mechara nyocha nke izizi site na iji teknụzụ nkewa ohere (SDM) na 4-isi ejikọtara ọnụ na-metụtara kilomita 2,000. Nnwale ahụ gosipụtara na eriri eriri njikọ nwere ike ịnwe ya na teknụzụ ma nwee nnukwu nnyefe arụmọrụ, ma na-echekwa ụlọ ọrụ ọkọlọtọ nke 125um na-agbakọta.
Ndi otu oru nyocha a nke Rene-Jean Essiambre, Roland Ryf na Murali Kodialam duziri ka ha weputara uzo ohuru nke nwere ike inye ezigbo usoro ihe ntanye na nke na adighi oru na uzo nke 10,000km. Usoro nnyefe a sitere na netwọkụ akwara ma nwee ike ịka mma karịa usoro ọdịnala (QPSK) eji eme ihe na sistemụ ụgbọ mmiri okpuru mmiri taa.
Onye nyocha Junho Cho na ndị otu ya egosila site na nnwale na n'ihe banyere oke ike, site na iji netwọkụ akwara iji bulie nzacha nhazi iji nweta uru ikike, ikike nke sistemu submarine nwere ike ịbawanye site na 23%.
Nokia Bell Labs raara nye n'ichepụta na iwulite ọdịnihu nke sistemu nkwukọrịta anya, na-akwalite mmepe nke physics, sayensị sayensị, mgbakọ na mwepụ, sọftụwia, na teknụzụ ngwa anya iji mepụta netwọkụ ọhụụ na-eme mgbanwe maka ọnọdụ na-agbanwe agbanwe, ma gafee ókè taa.